Liyuu Boolisku Itoobiyan ma aha, Itoobiyana ma Aqoonsana! – Rasaasa News
Ciidamad Liyuu Police-ku waa dhalinyaro ka soo jeedaan degaanka Somalida ee Itobiya maamusho. Waxaana la aas assay sanakii 2007, sababta loo aas aasayna waxay ahayd in ay la dagaalamaan Jabhada wadaniga xoraynta Ogadeeniya iyo shacabka taageera.
Ciidamada Liyuu Boliisku, ma aha ciidamo rasmi ah oo leh xuquuqda ay leeyihiin ciidamada rasmiga ah ee Itoobiya, laakiin waxay qaataan dhaqaale ka badan kan ay qaataan ciidamada Itoobiya.
Ciidamada Liyuu Boolisku way qabteen ujeeddadii loo aas aasay boqolkiiba sideetan iyo shan 85%, waxayna si xoog ah ku hoos keeneen shacabka degaanka Somalida maamulka Itoobiya oo aan hore u gaadhi jirin. Waxaa kale oo ay ciidanka Liyuu Boolisku dhabarka saarteen hawlihii ay qaban jireen ciidamada Itoobiya kuwaas oo maanta barta xirfado kala duwan.
Ciidamada Liyuu Boolisku waxay hawlgalo ka sameeyaan xuduuda dalka Somaliya, halkaas oo ay dhibaatooyin u gaystaan shacabka iyagana dhibaatooyin loo gaysto.
Hadaba ciidaanka aan sidaas ku sheegnay, qaar badan oo ka mid ah shacabka dalka Somaliya ayaa qaba in ciidanka Liyuu Boolisku ay reer yihiin. Dadwaynahaas oo muujiya cabashooyin ah in beel Soomaali ah oo ay Itoobiya hubaysay ku soo duusho, waxyeelana gaadhsiiso.
Gabalada Soomaaliya qaarkood waxaad arkaysaa ciidamada Itoobya oo fadhiisimo ku leh, hadana meel aan sidaa uga fogayn lagula dagaalamayo ama lagu laynayo ciidamada Liyuu Booliska. Ciidamada Itoobiya uma gurmadaan ciidanka Liyuu Boliiska, cid kasta oo la dagaalanta, hadana waxay qabanayaan hawlaha difaaca Itobiya.
Xitaa siyaasiyiinta maamul gabaleedyada Soomaalida ee ay Itoobiya maamusho uma arkaan in Liyuu Boolisku yahay ciidan Itobiya. Khilaafyada ka dhaca xuduud beenaadka u dhaxeeya Itobiya iyo Somaliya, waxaa eedooda la saaraa ciidanka Liyuu Booliska iyo shacaka ay ka soo jeedaan.
Maah maah Soomaaliyeed baa tidhaahda: Dameer mana hadhsado habartiina ma hadhiyo. Ciidamada Liyuu Booliiska marka ay u dhintaan difaaca Itobiya abaalkoodu waa Itoobiya ma aha ee waa budhcad degaanka Somalida Ogadeeniya u dhalatay.
Qabridahare oo ay Biyo Qariyeen